Galaxy A40s na Galaxy A60: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Galaxy A40s na Galaxy A60: Samsung n'etiti ọhụrụ
Ezinụlọ ahụ na-eto eto. Samsung na-ahapụ anyị ọtụtụ ekwentị dị n'etiti n'etiti izu ndị a, izu gara aga ha ewetala anyị otu. Ugbu a, ụlọ ọrụ Korea ahaziela mmemme ngosi na China. E gosipụtara ọhụụ ọhụrụ abụọ na nke a. Ndị a bụ Galaxy A40s na Galaxy A60.
Modelsdị abụọ dị iche iche, nke na-eme ka ọhụụ dị ukwuu nke Samsung dị n'etiti. Emegheela ekwentị abụọ ahụ, yabụ anyị nwere ha niile nkọwa banyere Galaxy A40s na Galaxy A60. Na mgbakwunye, nke abụọ bụ nke mbụ iwebata oghere na ihuenyo na mpaghara a.
Samsung na-aga n'ihu na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ekwentị na nke a. Na mgbakwunye, ebuputela ọtụtụ n'ime ha n'ahịa n'izu ndị a. Na Spain ọ ga-ekwe omume ịzụta ọtụtụ n'ime ha, ebe ha kwere nkwa inwe ezigbo nsonaazụ n'ahịa. Anyị na-agwa gị gbasara nke ọ bụla n'ime ekwentị abụọ a n'otu n'otu, ka ị wee mara ihe niile gbasara ha.
1 Nkọwapụta Galaxy A40s
2 Nkọwapụta Galaxy A60
Nkọwapụta Galaxy A40s
Site n'aha ya nwere ike gosi na ọ bụ ụdị vitamin nke Galaxy A40 webatara izu ole na ole gara aga. Nhazi yiri nke a, ya na onodu notch. Ọ bụ ezie na na nke a, anyị nwere ese foto azụ atọ. Na mgbakwunye na nkọwa dị iche iche, nke nnukwu batrị ya dị elu karịa ya niile. Ebe dị mma nke etiti, nke na-eme ka ị nwee mmetụta dị mma. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,4 sentimita asatọ Super AMOLED FullHD +
Nhazi: Exynos 7904
Rear igwefoto: 13 MP + 5 MP 5 MP
Usoro njikwa: Akara 9 XNUMX na Samsung One UI
Batrị: 5.000 mAh na 15W Fast Charge
Njikọ: 4G, WiFi 802.11 a / c, USB C, 3,5mm Jack, Bluetooth, LTE, GPS
ndị ọzọ: Rear mkpisiaka agụ na ihu kpọghee
Na mkpokọta anyị nwere ike ịhụ na Galaxy A40s a bụ ezigbo ihe nlele dị na etiti Samsung a. Ihe a na-emepụta ugbu a, nke yiri ụdị ndị ọzọ dị na nso a, igwefoto dị mma, nke doro anya bụ otu n'ime igodo ekwentị a, yana ezigbo batrị. Samsung juru na ekwentị a nwere batrị 5.000 mAh. Ekele ya, a na-atụ anya ka nnwere onwe dị mma na ekwentị n'oge niile.
Samsung Galaxy A70 bụzi gọọmentị: nkọwa, ọnụahịa na nnweta
Maka ugbu a, ama ama ama ama ama na China. N'ihi na, anyị enweghị nkọwa gbasara mmalite ahịa ya na Europe. Ọnụahịa ya na China bụ ihe dị ka euro 200 ịgbanwe. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ihe dị oke ọnụ, n'ezie, mgbe ọ malitere na Europe. Mana anyị enweghị ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị ịhapụ n'oge a.
Nkọwapụta Galaxy A60
Na nke abụọ anyị na-ahụ Galaxy A60 a, nke izu a bụ isiokwu nke leaks. N'ihi na anyị nwere ike ịhụ ihe ọ bụ mbụ nke ụdị a maka itinye oghere na ihuenyo ahụ. Somedị ​​dịtụ iche maka oke a. Ọ bụ ezie na ekwentị ahụ na-aga n'ihu itinye akụkụ ndị ọzọ dị mkpa na ya. Ebe ọ bụ na anyị nwere ese foto dị mma, nkọwa dị mma n'ozuzu ya na imepụta ọgbara ọhụrụ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,3-anụ ọhịa IPS LCD na mkpebi FullHD +
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 675
Rear igwefoto: 32MP na oghere f / 1.7 + 8MP na oghere f / 2.2 + 5MP na oghere f / 2.2
Igwefoto n'ihu: 32MP
Batrị: 3.500 mAh na Oke Aka
Njikọ: 4G, WiFi 802.11 a / c, USB C, 3,5mm Jack, Bluetooth, GPS
ndị ọzọ: Rear akara mkpisiaka agụ na ihuenyo ụda usoro
O yiri ka Samsung sitere na ekwentị ya ọzọ sitere n’ike mmụọ nsọ. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ akụkụ jikọrọ n'etiti Galaxy A60 na Galaxy A8s, nke bụ ekwentị mbụ nke ika ahụ nwere oghere na ihuenyo ahụ. Ọ bụ ezie na ọdịiche dị na ọkwa ọrụ aka n'etiti ekwentị abụọ ahụ doro anya. Ya mere na nke a, anyị na-eche ihu n'etiti etiti, nke na-achọ igosipụta ihe dị iche na ezinụlọ ọhụrụ a nke ika ahụ.
Ihe dị iche iche nke Galaxy J ga-apụ n'anya maka Galaxy A
Maka ugbu a enweghị data na olee mgbe Galaxy A60 a ga-abata na Europe. Anyị maara na ọnụahịa ya na China bụ ihe dịka euro 265 na ọnụego mgbanwe. Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ịmalite ya na Europe ga-enwe ọnụahịa dị elu. Mana n'oge ahụ enweghị ụbọchị ma ọ bụ ọnụahịa asịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Galaxy A40s na Galaxy A60: Samsung n'etiti ọhụrụ
Njegharị Metal Slug iji degharịa ihe eserese, mana ichefu ihe kacha mkpa